Xog: Al-Shabaab oo 200 haween usoo dirtay DF DAAWO MUQAALKA) - iftineducation.com
Xog: Al-Shabaab oo 200 haween usoo dirtay DF DAAWO MUQAALKA)
iftineducation.com – Xubno ka tirsan Dowlada Britain oo xogo la wadaagay Wargeyska Daily Mail, ayaa waxa ay shaaca ka qaaden in maleeshiyaadka Al-shabaab ay heleen Xubno haween ah kuwaasi oo loo diyaariyay Uruurinta macluumaadka Dowlada.
Dumarkaani Sirdoonka ah, ayaa waxa uu Wargeyska Daily Mail, sheegay inay gaarayaan ilaa 200 oo si toos ah uga howlgali doono xarumaha Dowlada iyo guryaha Madaxda Dowlada, iyaga oo u shaqeyn doona qaab shaqaalenimo.
Dumarkaani oo ay sheegtay Britain, ayaa waxaa badi ka geeriyooday Horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada Al-shabaab, halka qaarkoodna ay ahaayen Naftood haligayaal ka qeybqaatay weeraro toos ah oo ay maleeshiyadu ku qaaden Xarumo shacab.
Warbixintaan waxaa lagu sheegay in haweenkaan loo diyaarshay inay u shaqeeyaan sida sirdoonka oo kale oo ay ururiyaan xogaha muhiimka ah ayagoo ka shaqeeya hoteelada halka qaarkoodna ay wadooyinka Muqdisho ka sameysan doonaan goobo ganacsi.
Haweeneydii isku qarxisay hotelka Central ee Muqdisho bishii February sanadkii hore ayaa ka mid aheyd dadkii ay tababartay haweeneyda loo yaqaan Samatha Lewthewite oo ku magac dheer Carmalada Cad.
Samatha Lewthewite, ayaa muddo kooban Tababar ku siisay inkabadan 430 Rag iyo Haween isugu jira kuwaasi oo loo tababaray Dilka, Ololaha, Tashkiilinta, Ismiidaaminta, Gowraca, halka kuwa kalena la baro sida xogaha looga keeno meelaha dawlada Somalia maamusho, sida uu Wargeyska Daily Mail qoray.
Geesta kale, Xubnaha Britainka ah ee Daily Mail Xogtaani la wadaagay ayaa sheegay in DFS looga baahan yahay inay ku baraarugto dhaqdhaqaaqyada dadban oo ay maleeshiyada Al-shabaab ku uruurineyso macluumaadka Dowlada.
Sidee U Noqon Karaa Qof Kasbada Farxadda Guurka??